"ယာဉ်စီးခငွေ အပြည့်အဝ ထည့်မစီးဘူးဆိုရင် ဥပဒေအရ ဘယ်လို အရေးယူလို့ရမလဲ ဆိုတာကို ဆွေးနွေးဖို့? - Yangon Media Group
“ယာဉ်စီးခငွေ အပြည့်အဝ ထည့်မစီးဘူးဆိုရင် ဥပဒေအရ ဘယ်လို အရေးယူလို့ရမလဲ ဆိုတာကို ဆွေးနွေးဖို့?
Power Eleven Public Co.,Ltd မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ကိုတရုတ်လေးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ရန်ကုန်မြို့တွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီး တစ်နှစ်ကျော်ကြာကာလအတွင်း လုပ်ငန်းရှင်များအကြားတွေ့ ကြုံနေရသည့်အခက်အခဲများအား Power Eleven Public Co.,Ltd ၏ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ကိုတရုတ်လေးနှင့် ယခုလို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည်။
YBS စနစ် ပြောင်းလဲတာကလည်း တစ်နှစ်ကျော်ပြီပေါ့။ အခုချိန်အထိ YRTA ဥပဒေလည်း မရေးဆွဲရသေးဘူး။ အဲဒီအတွက် ယာဉ်ပိုင်ရှင်တွေ၊ ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့နေရလဲ။
ဥပဒေနဲ့အညီ မရေးဆွဲရသေးဘူးဆိုတဲ့ အပေါ်မှာတော့ မှတ်ချက်မပေးလိုဘူး။ ဘာ ဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒီအခန်းကဏ္ဍတွေက Law နဲ့ဆိုင်တဲ့ အခါကျတော့ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်ကကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် နားမလည်ဘူး။ နားမလည်တဲ့အတွက် အဲဒီအပေါ် မှာတော့ မှတ်ချက်မပေးလိုဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ယာဉ်လိုင်းတွေအနေနဲ့ကတော့ တိုင်းဒေသကြီးပို့ဆောင်ရေး ဥပဒေဆိုတာက ရှိပြီးသား။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ အဲဒီပို့ဆောင်ရေးဥပဒေနဲ့အညီ ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်တယ်။ ကုမ္ပဏီ ဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုရင်လည်း ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေကရှိပြီးသားဆိုတော့ ကုမ္ပဏီရဲ့ လုပ်ငန်းတွေက အဲဒီဥပဒေနဲ့ ညီအောင်ပဲ ကျွန်တော်တို့ ဆောင်ရွက်ပါတယ်။
၂၁ ယာဉ်တွေအကုန်လုံးကို ဝင်ငွေအချိုးချ ခွဲဝေယူတဲ့စနစ်ကို ကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာလေး ပြောပြပေးပါလား။
၂၁ ယာဉ်လိုင်းမှာက ကုမ္ပဏီနှစ်ခုရှိ တယ်။ ခေတ်သစ်ဘုရင့်နောင်ကုမ္ပဏီနဲ့ ပါဝါအလဲဗင်းကုမ္ပဏီဆိုပြီး နှစ်ခုရှိတယ်။ ကျွန် တော်တို့က အရင် ၈၃ စီးရှိတယ်။ သူတို့က ယာဉ်စီးရေ ၉ဝနဲ့ ၁ဝဝ လောက်ရှိတယ်။ YBS ရဲ့မူမှာက ယာဉ်တွေကို စုပေါင်းခွဲဝေယူတဲ့ ဝေပုံကျစနစ်ကို ကျင့်သုံးခိုင်းတယ်။ ကျင့်သုံးခိုင်းတော့ ကျွန်တော်တို့ကတော့ YBS ကတည်းက လုပ်လာခဲ့တယ်။ ဟိုဘက်ခေတ် သစ်ဘုရင့်နောင်ကုမ္ပဏီကတော့ မေ ၁ ရက်မှာ စနိုင်တယ်။
အဲလိုပေါင်းလိုက်တော့ ဝန်ဆောင်မှုအပိုင်းမှာရော ဘယ်လို ရှိလာလဲ။ ဘာတွေခြားနားမှုရှိလာလဲ။ အားသာချက် ၊ အား နည်းချက်က ဘာတွေဖြစ်လာလဲ။
ခြားနားချက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့က တော့ ဒီဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို လုပ်တာက တော့ သူတို့ထက် နည်းနည်းလေးစောတယ်။ စောတော့ ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာက ပြည့်စုံ ပြီးသား ဖြစ်တယ်။ သူတို့ ခေတ်သစ်ဘုရင့် နောင်ဘက်ကတော့ နောက်ကျတယ်။ နောက် ကျတော့ ခရီးစဉ်တစ်ခုမှာ ကုမ္ပဏီနှစ်ခု စီမံ အုပ်ချုပ်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှု မူဝါဒမတူတဲ့အခါကျ တော့ ယာဉ်လုပ်သားတွေကို စည်းကမ်းပိုင်းထိန်းချုပ်ရတဲ့နေရာမှာ နည်းနည်းအခက်အခဲရှိတယ်။ ဥပမာပေါ့ ကျွန်တော်တို့က စုပေါင်း ခွဲဝေယူတဲ့စနစ်ကို သွားတယ်။ တစ်ဖက် ယာဉ်လိုင်းက ကားတွေကိုပုတ်ပြတ်ပေးတယ်။ ပုတ်ပြတ်ပေးတယ်ဆိုရင် ယာဉ်လုပ်သားတွေ က ပုတ်ပြတ်ပေးတဲ့ကားကိုပဲ မောင်းချင်တယ်။ အဲဒီတော့ ဒီဘက်မှာက စီမံအုပ်ချုပ်ရတာ အခက်အခဲရှိတယ်။ ဒီဘက်က ယာဉ်မောင်း တွေ တော်တော်များများက ဟိုဘက်ကိုပြောင်း ပြီးတော့ မောင်းကြတယ်။ အဲဒီအခက်အခဲ လေးတွေ ရှိတယ်။ ဥပမာ ကျွန်တော်တို့က တော့ စုပေါင်းခွဲဝေယူတဲ့ ဝေပုံကျစနစ်ကို ကျင့် သုံးတဲ့နေရာမှာ စီမံအုပ်ချုပ်မှု အရမ်းကောင်းတယ်။ ခရီးသွားက Complain တက်လို့ရှိရင် မှတ်တိုင် ရပ်မပေးတာတို့၊ ကြမ်းကြမ်းတမ်း တမ်း မောင်းတာတို့ Complain တက်လို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့က ဒီယာဉ်နဲ့ ဒီယာဉ်လုပ်သားကို ချက်ချင်းခေါ်ပြီးတော့ action ယူလို့ရတယ်။
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှုအပိုင်းကို အားကောင်းတယ်။ စောစောကလို ပုတ်ပြတ်ပေးတဲ့ကားမျိုး ဖြစ်တယ်။ ဝေပုံကျစနစ်ကိုလည်း မကျင့်သုံး ဘူးဆိုရင် ခရီးသွားက Complain တက်တဲ့ အချိန်ကျလို့ရှိရင် တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးမယ့် လူမရှိဘူး။ မရှိဘူးဆိုတာက ယာဉ်ပိုင်ရှင်ကလည်း သူက တာဝန်မခံဘူး။ ယာဉ်လုပ်သား ကလည်း သူပုတ်ပြတ်ယူထားတဲ့ကားဆိုတော့ သူ့လုပ်ပိုင်ခွင့် ဖြစ်နေတယ်။ သူတွက်ခြေကိုက် အောင် မောင်းမယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်နေတယ်။ ယာဉ်ပိုင်ရှင်ကလည်း သူက ယာဉ်လုပ်သား ကို ပုတ်ပြတ်ပေးထားတယ်။ လိုင်းကို တိုင်လို့ ရှိရင်လည်းလိုင်းက ပိုင်ရှင်ခန့်ထားတဲ့ ယာဉ် မောင်းဆိုတာမျိုးတွေက ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ စီမံအုပ်ချုပ်တဲ့အပိုင်းမှာ ထိရောက်မှုမရှိဘူး။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့က ခရီးစဉ်တစ်ခုမှာ စီမံအုပ်ချုပ်မှု မတူဘူးဆိုရင် အရမ်းပြဿနာရှိတယ်။ အဲဒီအခက်အခဲလေးတွေကို တော် တော်များများ ကြုံခဲ့တယ်။ အခုတော့ သူတို့ မေ ၁ ရက်ကနေ စပြီးတော့ ဝေပုံကျစနစ်ကို လုပ်တယ်။ တော်တော်အဆင်ပြေမယ်လို့ယူဆ ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ စည်းကမ်းပိုင်း တွေပေါ့။ စည်းကမ်းပိုင်းနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပိုင်းမှာ တော့ တိုးတက်လာမယ်လို့ ထင်တယ်ဗျ။
လူထုမိတ်ဆွေ ယာဉ်လိုင်းကရော ယာဉ်မောင်း၊ ယာဉ်စီးရေ ဘယ်လောက်လောက်နဲ့ ပြေးဆွဲနေလဲ။
လူထုမိတ်ဆွေမှာ YBS ၇၈မှာက အစီး ရေ ၅ဝ၊ YBS ၉၃ မှာက အစီးရေ ၅ဝ၊ YBS ၉၄ အစီး ၅ဝပေါ့။ ယာဉ်မောင်းအရေအတွက် ဆိုရင်တော့ သုံးလိုင်းပေါင်းကို ၁၈ဝလောက် ရှိပါတယ်။
လူထုမိတ်ဆွေရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏကျတော့ရော ခန့် မှန်းခြေ ဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲ သိခွင့်ရနိုင်မလား။
သူက ယာဉ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုပြောမယ်ဆိုရင် တစ်စီးရဲ့တန်ဖိုးက ဒေါ်လာရှစ်သောင်းရှစ် ထောင်လောက် ရှိတယ်။ ကျန်တဲ့ Operation စရိတ်ကတော့ ခန့်မှန်းကတော့ ပြောလို့ မရသေးဘူး။ Operation စရိတ်ကတော့ လက်ရှိအချိန်မှစပြီးတော့ ယာဉ်ရပ်နားကွင်းတို့ ဘာတို့ အဆောက်အအုံတွေ လုပ်တုန်းပဲရှိ သေးတယ်ဗျ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များတယ်။ ယာဉ်အသစ်တွေနဲ့ လုပ်ငန်း အသစ် ပုံစံမျိုးဆိုတော့ ဒီကဏ္ဍက အရင်းပြန်လည်ရရှိဖို့ ဆိုရင် ခန့်မှန်းခြေ နှစ်ဘယ်လောက်လောက်ကြာနိုင်မလဲ။
ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းဆိုရင်တော့ ငါးနှစ်နဲ့ ခုနစ်နှစ်ဝန်းကျင်လောက်မှ သူက အရင်း ကျေကာလ ဖြစ်မယ်။ ငါးနှစ်နဲ့ ခုနစ်နှစ်သက် တမ်းလောက်ကနေ ၁ဝ နှစ်လောက်အထိ သက်တမ်းခံအောင်လို့ ဒီကားတွေကို manage ပိုင်းမှာ စနစ်တကျနဲ့ လုပ်နိုင်အောင်လို့ ကျွန် တော်တို့ ကြိုးစားရလိမ့်မယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
လူထုမိတ်ဆွေကယာဉ်တွေကို အသံစနစ် မထည့်သေးဘူး လား။
အဲဒီလူထုမိတ်ဆွေကားတွေမှာ device တွေက ပါတော့ပါပြီးသား။ အဲဒါကို တပ်ဆင် ပေးလိုက်တဲ့ ကုမ္ပဏီက Password တွေ ချ ပေးဖို့လိုတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ညှိနှိုင်း နေတယ်။ ရခဲ့ရင်တော့ အဲဒီနည်းပညာကိုသုံးဖို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ အဆင်မပြေရင်တော့ ဒီစက်တွေ ထပ်ဝယ်ရမယ်ဗျ။
နောက်တစ်ခုက တချို့ယာဉ်လိုင်းတွေမှာ ကိုတရုတ်လေးတို့ ပါဝါအလဲဗင်းကနေပြီး ယာဉ်အသစ်တွေနဲ့ ပြေးဆွဲနေတော့ သက်ရောက်မှုတွေ ဘယ်လိုရှိလဲ။
ယာဉ်လိုင်းဆိုတဲ့နေရာကနေ ဝန်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို ပြောင်းသွားတယ်။ ခရီးသွားလူထုရဲ့သဘောထားကတော့ တစ်ခုတည်းပါပဲ။ ဝန်ဆောင်မှုကောင်းတဲ့ ယာဉ်လိုင်းကိုပဲ ဦးစားပေးပြီးတော့ ဆွဲမှာပေါ့။ ဆွဲမှာဆိုတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ ယာဉ်သစ်တွေ ဝန်ဆောင်မှုကောင်းလာလို့ရှိရင် ဝန်ဆောင်မှု ညံ့တဲ့ ယာဉ်တွေကတော့ အနည်းနဲ့ အများ တော့ ဝင်ငွေကျမယ်။ စီးပွားရေး ထိခိုက်မှာ ပေါ့။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့က ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဝန်ဆောင်မှု ပိုင်းကိုပဲ ဂရုတစိုက် အားထည့်ပြီးတော့ ဆောင် ရွက်ရမှာပါ။
ပုံးထဲကို ငွေထည့်တဲ့စနစ်မှာပေါ့ ထည့်တဲ့လူတွေရှိသလို မထည့်တဲ့လူတွေလည်းရှိတော့ တချို့ကျပြန်တော့ အစုတ် အပြဲတွေ ထည့်ကြတယ်လို့ ကြားရတယ်။ အဲဒါတွေ ဘယ် လိုများ ကြုံတွေ့နေရလဲ။ ဒီဟာကို ပြောင်းလဲဖို့ဆိုရင်ရော ဘယ်လိုတွေ လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကို အကြံပြုပေးပါဦး။
လက်ရှိအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့နားလည် သလောက်ဆိုရင် အတိတ်ကာလတုန်းက နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့။ အဲဒီကာလတုန်းက ကျွန်တော်တို့ ယာဉ်လိုင်းလောကမှာ သူတို့က နောက်ပြောင်နေကျ ရှိတယ်ဗျ။ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ ‘စပယ်ယာရိုးရင် ၂ဝ ခိုး တယ်’ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ ဆိုတော့ အတိတ်ကာ လမှာက ငွေကြေး မသမာမှုလုပ်တာ ယာဉ် မောင်းနဲ့ စပယ်ယာ သုံးယောက်ပဲရှိတယ်။ အကုန်လုံးတော့မဆိုလိုဘူး။ ကောင်းတဲ့ယာဉ် မောင်းတွေလဲ အများကြီးရှိတယ်။ အဲဒီမှာ မသမာမှုလုပ်မယ်ဆိုရင် သုံးဦးရှိတယ်။ ဒီ ကနေ့ မျက်မှောက်ခေတ်မှာတော့ ယာဉ်လိုင်း တွေက သုံးဦးထက်များပြားသောဒုက္ခကို သူ တို့က ကြုံတွေ့နေရတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ခရီးသွားတွေအရေအတွက် တော်တော်များများမှာ ဒီယာဉ်စီးခ အပြည့်ထည့်မစီးတာတို့၊ ပိုက်ဆံအစုတ်တွေထည့်စီးတာတို့ အဲဒီမှာမှ ကားကိုမောင်းတဲ့ ယာဉ်မောင်းသူက လည်း ငွေကြေးမသမာမှုတွေ လုပ်တာတွေလည်း ရှိတယ်။ ရှိတော့ ကျွန်တော်တို့က အရင်တုန်းက သုံးဦးရဲ့ဒုက္ခကိုခံရတယ်။ ဒီနေ့ မှာတော့ အဲဒီထက်များတဲ့ဒုက္ခကို ခံနေရတဲ့ အခက်အခဲတွေရှိတယ်။ ဒီကနေ့ ယာဉ်လိုင်း တွေ အခက်အခဲကြုံတွေ့ရတဲ့အထဲမှာ အဲဒီအခန်းကဏ္ဍက တော်တော်အရေးပါပါတယ်။
ဆိုတော့ ဒါတွေပပျောက်အောင် ဘယ်လိုလုပ် မလဲဆိုရင် တစ်အချက်နည်းပညာပိုင်းနဲ့ တည့်မတ်ရမှာပါ။ ဥပမာ ကတ်စနစ်လိုဟာမျိုးပေါ့။ နှစ်အချက် ဥပဒေပေါ့။ ဒီမှာ ယာဉ်လုပ်သား တွေ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ရင် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားတာ ရှိသလို ယာဉ်စီးခငွေ အပြည့်အဝထည့်မစီးဘူးဆိုရင်လည်း ဥပဒေအရ ဘယ်လို အရေးယူလို့ရမလဲဆိုတာကို ဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့က မြင်တယ်။ ဘာ့ ကြောင့်လဲဆိုတော့ အများပြည်သူပိုင်ငွေကြေး ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါကိုဥပဒေအရ ဘယ်လို အရေးယူမလဲ ဆိုတာကိုတော့ ဒါတွေသုံးသပ် ဖို့ လိုတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။ အဲဒီ တော့ နည်းပညာပိုင်းနဲ့ လူတွေကို တည့်မတ် ရမယ်။ လူထုကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသိပညာပေးဖို့လိုတယ်။ ဝန်ဆောင်မှုကောင်းတဲ့ စနစ်တွေနဲ့ ယာဉ်လိုင်းတွေ တိုးတက်အောင် သွားတဲ့နေရာမှာ ခရီးသွားတွေရဲ့အားက မဖြစ် မနေ လိုပါတယ်။ အစိုးရက မူဝါဒ ချပေးရုံနဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေက ဖော်ဆောင်ရုံနဲ့ မအောင် မြင်ပါဘူး။ လူအများစုရဲ့ Culture ကို ပြောင်း လဲဖို့က အဓိက လိုနေတာပါ။ အဲဒါတွေက အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒီအချက် သုံး ချက်က မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်မှသာလျှင် YBS ယာဉ်လိုင်းတွေ တိုးတက်ရေးကို အထောက် အကူ ဖြစ်စေမှာပါ။
အစ်ကိုတို့ဆီမှာဆိုရင် အမျိုးသမီးယာဉ်မောင်းတွေ ရှိတယ်။ သူတို့ကိုလည်း လေ့ကျင့်ပေးနေတာတွေ တွေ့ရတယ်။ လက်ရှိ လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ရောက်သွားတာရော ဘယ်လောက် လောက် ရှိလဲ။
လက်ရှိအချိန်မှာတော့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ကို လေးငါးဦးလောက်တော့ ရောက်နေပါပြီ။ ထပ်ပြီးတော့ လေ့ကျင့်နေတာလည်းရှိပါတယ်။ မူလလေ့ကျင့်ပေးနေတဲ့ လူတော်တော်များ များက မကြာတော့တဲ့ကာလမှာ လုပ်ငန်းခွင် ထဲ ရောက်တော့မှာပါ။
မထသကနေ YBS ကို ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာ အများပြည်သူရော ၊ တကယ်လုပ်နေတဲ့လူရော အားသာ ချက် ၊ အားနည်းချက်တွေက ဘာရှိမလဲ။
အဓိကတော့ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေပေါ့။ ယခင်တုန်းက အိုဟောင်းနေတဲ့နေရာမှာ ယာဉ်သစ်တွေ ဖြစ်လာတာပေါ့။ ဝန်ဆောင်မှု ပိုင်းမှာဆိုရင် အဲကွန်းစနစ်တွေ ပါလာတယ်။ ယာဉ်လိုင်းတွေရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းတွေ၊ နည်း ပညာပိုင်းတွေ ပါလာတယ်။ နောက်တစ်ခုက အမြင်အာရုံနဲ့ အကြားအာရုံချို့တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် တွေအတွက် Auto Catalogues Announcer Device ပေါ့။ မှတ်တိုင်ကြေညာတဲ့ စက်တွေပါလာတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်း တစ်ခါ ထပ်ပြီးတော့ တချို့ကျတော့ အကြားအာရုံ ချို့တဲ့တယ်ဗျ။ အဲဒီတော့ ကြေညာပေးတဲ့စနစ် နဲ့ သိပ်ပြီးတော့ မထိရောက်ဘူး။ အခုနောက် ပိုင်း LED တီဗွီလေးတွေနဲ့ ရောက်တဲ့မှတ် တိုင်ကို ကြေညာပေးတဲ့စနစ်တွေ လုပ်နေတာလည်း တွေ့ရတယ်။ အဲဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရပါတယ်။ အရင်တုန်းက စပယ်ယာတွေနဲ့ မကြာခဏ ပြဿနာတက်ပေါ့။ တိုးကျိတ် အတင်း ဆွဲတင် ဆွဲချပေါ့။ အဲဒါတွေ ပျောက် သွားပါပြီ။ အေးဆေးစီးရတဲ့ အခြေအနေပေါ့။ ဒါတွေကတော့ သိသာထင်ရှားတဲ့ အချက် တွေပေါ့ဗျာ။
''ဘယ်လိုမျိုး ရိုက်ချင်လဲဆိုတာတော့ ဘောင်ကြီးနဲ့ မရှိဘူး။ ကာရိုက်တာ အကွဲလေးတွေ လုပ်ချင်တယ်''
ချန်ပီယံလိဂ် ဆုဖလားကို ဂျူဗင်တပ် ရယူနိုင်မည်ဟု စီရော်နယ်ဒို ခန့်မှန်း
ကြားဖြတ်သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရန် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် ကောက်ကွက်များ ရွေး?
(၅၅) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာ ပြပွဲတွင် စုစုပေါင်း ယူရိုသန်း ၄၂၇ ဒသမ ဝ၉၅ သန်းဖိုးေ??